ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က2နှစ်ပေါင်း7months ago #819
ငါ6လဂျမ်ဘိုကြေးပေးသွင်းအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ကိုယ်သာနေပါစေဒီဈပြဿနာရှိခြင်းငါတစ်ခုတည်းသော်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်, သောအရာကို download, ဒီ site ပေါ်တွင် 1300KB / sec ကို download speed ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အနိုင်နိုင်တတ်နိုင်ပါ၏။ တစ်စုံတစ်ဦးကထိုအအမြန်နှုန်းသို့ ကျေးဇူးပြု. ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က2နှစ်ပေါင်း7months ago #821
ယခုတွင်ငါသည် ကျေးဇူးပြု. ထပ်ကြိုးစားပါ, ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကိုမှပိုပြီး bandwidth ကိုထားကြပြီ။
တနင်္လာနေ့စကားမစပ်ငါဒေတာ-စင်တာမှာရက်ချိန်းရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပကြသည်ခဲ့ကြသည်အထွတ်အထိပ်အချိန်တွင်ကျွန်တော်နေဆဲမြန်နှုန်းမြင့်အစေခံနိုင်အောင်ငါ ပို. ပင် bandwidth ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က2နှစ်ပေါင်း7months ago #822
ငါအသုံးပြုသူတစ်ဦးမဟုတ်, တစ်ဦးက Moderator အဖြစ်ပို့စ်တင်တာပါ, ဒါပေမယ့်ငါ Rikoooo ကနေ download speed ကအတူပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က2နှစ်ပေါင်း7months ago #823
အဆိုပါ Osprey များအတွက် သွား. သာ သွား. ပြုလေ၏အလုပ်လုပ်ခဲ့သောတစ်ဦးတည်းသာပြီးတော့အကြောင်းကို install အပေါ်ဖန်တီးသူကမှတ်ချက်ရှိခဲ့ပြီးတော့, 26 နာရီကို ယူ. တစ်ဦးအချည်းနှီးသောဖိုင်ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူတစ်ဦးအချည်းနှီးသောဖိုင်တစ်စက္ကန့်အချိန် 12hrs 45 မိနစ်သွားလေ၏ အက်ဒမင်ရှင်းလင်းဖို့, install တစ်ထုတ်ကုန်မီနူးနဲ့ privledges သို့မဟုတ် thry တစ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြေးယင်း၏ thry ကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက် install လုပ်မယ့် manatory ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်, အရှုပ်ထွေးဤကဖိုင်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်, သငျသညျကို run ရမယ် တစ်ဦးညာဘက်ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲသူ mode ကိုအတွက်က MS ပျံသန်း Simulator ကို, ပြီးတော့ထုတ်ကုန် load ပါလိမ့်မယ်။ ပြုမိပါလျှင်မဟုတ်ရင်ကမျိုးစုံပျက်ကျခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်၏အေးခဲစေပါလိမ့်မယ်။ ကပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအသုံးပြုရန်အစဉ်အဆက်ပြီး command line ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ, သုတေသနပြုလေ၏။ လေယာဉ်ပျံ၏အလမ်းအတွက် add ons တွေကိုများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဤငါ၏အ cfg ထိန်းချုပ်ထားတက်အဆုံးသတ်သောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်, ကိုယ့်အတွက် သွား. မျိုးစုံစာရင်းများကိုမြင်တော်မူ၏။ လည်းဤဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ကပြတင်းပေါက်အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တစ်ချို့ယွင်းလည်းမရှိလျှင်အန္တရာယ်။ သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးလျှင် install ရှေ့၌သင်တို့ဖိုင် cfg တစ် backup လုပ်ထားပါစေ။ ဖိုင်တည်နေရာထိုကဲ့သို့သော% APPDATA% ကို Microsoft ကဲ့သို့ဖြစ်၏ /FSX။ ဒေါင်းလုဒ် AIROLANE, ဒီနည်းကို Model နဲ့ TYPE ဆယ်နှစ်တွင်တွေ့မြင်အလွန်အကောင်းဆုံး Ive IS FLYABILITY စုံလင်သည်, အိုင်တီအထူးသဖြင့်အထက် CONSOLE.Which ဘာမှ Slides OR toggle ရန်ကြိုးစားနေဖို့အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းအနည်းငယ်ကြာနိုင်ရုံစတင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ဖြစ်ပျက် နှင့်ပျံသန်းပေမယ် itll အားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်တို့ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် bling အဖြစ် run ဖို့ admin ရဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်တစ်ချိန်က Yoy disapointed ဖြစ် wont ။ သင်တစ်ဦးအချည်းနှီးသော download ပြုလုပ် 24 နာရီစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပါလျှင်ထက်အခြားအများနှင့်အခြားမည်သည့်လမ်းကြိုးစားနေအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆဲအကောင်းဆုံး ons တွေကို bar ကိုအဘယ်သူမျှမ add နှင့်အတူအကောင်းဆုံး site ကို။
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က2နှစ်ပေါင်း7months ago #824
ကြောက်မက်ဘွယ်သော download speed က လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #1091
သင်ကွန်ပျူတာသို့မီနူးသို့သွားရန်နှင့်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာကို rikoooo သို့ပြောင်းရန်လိုသည်။ အကယ်၍ သင်ဖိုင်သည်ရှေ့တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကသင် PPOE ကိုအသုံးမပြုပါကသင်၏အင်တာနက်ချိန်ညှိချက်များကိုစစ်ဆေးပါ (အင်တာနက်ကို ၀ င်ရန်စကားဝှက်ကိုသုံးရမည်) အခြား option သို့ပြောင်းလဲပါ။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်အငြင်းပွားစရာအချက်တစ်ချက်မှာမှားယွင်းသောပေါ်တယ်မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်သို့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အတ္တလန္တိတ်ဒေသရှိအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဒေသခံအင်တာနက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုတတ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းပမာဏကြောင့်တခါတရံနှေးကွေးသည်။ ဆာဗာများကလုပ်ငန်းများ၌ခံရ။ သင်၏နာရီကိုစစ်ဆေးပါ၊ သင်၏အမေရိကန်အလေးသာမှုသည်သင်၏ဥရောပတွင်ရှိသောလူအများစုသူတို့၏နေ့၏အမြင့်ဆုံးရောက်သောအခါ download ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပါ။ ညနေနှောင်းပိုင်းတွင်သူတို့၏အချိန်ကိုဖမ်းယူပါ။ ဒီချိန်ညှိချက်များကိုစစ်ဆေးပါ၊ သင့်ကွန်ပျူတာကို ၂၀၀% ကျော်ရေးထည့်ရန်အလျင်မြန်လိုလျှင်၊ ငါမမြင်မိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပါ။
0.227 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်